eNasha.com - प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्दैनन्, नेपालको राजê
प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्दैनन्, नेपालको राजधानी फेर्नुपर्छ
ज्योतिष ओजराज लोहनी देशको बारेमा भविष्यबाणीहरु गरेर बेलाबेलामा चर्चामा आइ नैं रहनुहुन्छ । छ महिना अघि इनशाडटकमका लागि दिनेश कार्कीसँग संविधान सभाको चुनाव मंसिर ६ मा हुदैन भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला तत्कालिन आठै दल र निर्वाचन आयोग चुनावी तयारीमा जुटिरहेको बेला लोहनीको भविष्यवाणीलाई पत्याउन गाह्रो भएको थियो । तर समय परिस्थिति र घटनाक्रमले ज्योतिष लोहनीको भविष्यवाणी सत्य सावित भएको छ । यो सालभित्र संविधानसभाको चुनाव होला कि नहोला भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । यसपटकको भविष्यवाणीमा लोहनीले नेपालको राजधानी काठमाडौं नफापेको र देशको भलो चाहने हो भने अविलम्ब यसलाई सार्नुपर्ने जिकिर उहाँको छ । 'पाकिस्तान, भारत आदि देशले आफ्नो देशको राजधानी अनुकूलतालाई हेरेर सार्न हुन्छ हामीले किन सार्न नहुने ?'-ज्योतिषको प्रश्न छ । यसैगरी प्रचण्ड राष्ट्रपति नबन्ने र तत्कालका लागि एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको बताउने ज्योतिष लोहनी पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाको ग्रहगति बलियो बन्दै गएको बताउनुहुन्छ । प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा दिनेश कार्कीले ज्योतिष लोहनीसंग गरेको वार्ताको मुख्य अंश -
मुलुकको अहिलेको ग्रहदशा कस्तो छ ?
मुलुकको अहिलेको अवस्था एकदमै प्रतिकूल छ । प्रतिकूल समयमा विभिन्न खालका दैविक, सामाजिक तथा दैविक घटनाहरू घट्ने गर्छन् । गत साउन महिनामा ग्रहहरू अनिष्ट छ भनी तपाईंसँग नै कुराकानी गरेको हुँ । साउन महिनामा राजनीतिक तथा प्राकृतिक हिसाबले धेरै मान्छेहरू मरे र हजारौं विस्थापित भए । अहिले पनि मंगलग्रह खराब स्थानमा छ । मंगलग्रह खराब भएपछि चोरी डकैती, आर्थिक समस्या, हतियार प्रदर्शन र विषादी प्रयोगका घटनाहरू हुन्छन् । अहिलको समयको ग्रहस्थिति राम्रो छ ।
मुलुकको राजनीति मुठभेडतर्फअगाडि बढ्छ कि मेलमिलापतिर ?
मैले अगाडि नै भने, जब मंगलग्रह खराब हुन्छ, तब हतियारको होडबाजी र हत्या एवं हिंसा बढ्छ । यस अवस्थामा राजनीति गर्ने मानिसहरूले बुद्धि पुर्‍याएनन् भने ठूलै खालको रक्तपात पनि हुनसक्छ । यस अवस्था करिब करिब २०६४ सालभरि नै रहन्छ र यही सालभित्र यसले मूर्तरूपसमेत लिन्छ र राजनीतिले दिशाबोध लिन्छ ।
यहाँले संविधानसभाको निर्वाचन मंसिर ६ गते कुनै हालतमा हुँदैन भन्नु भएको थियो, आखिर त्यही भयो, अब कहिले होला निर्वाचन ?
२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने कुनै सम्भावना छैन । यही सालमा निर्वाचन भयो भने त्यसको नतिजाचाहिँ २०६५ सालमा मात्र आउँछ ।
किन हुँदैन संविधानसभाको निर्वाचन ?
संविधानसभाको निर्वाचन हुनु भनेको देशले एउटा गति निर्धारण गर्नु हो । जब देशको ग्रहस्थिति नै राम्रो छैन भने कसरी निर्वाचन हुन्छ- देशको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई छैन र म त्यतातर्फ जान्न पनि । मंसिर ६ गतेको निर्वाचनका लागि दल, निर्वाचन आयोगदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत तयार भएका थिए । निर्वाचन हुँदैनभन्दा मान्छे हाँस्ने गर्दथे तर यथार्थतामा निर्वाचन हुन सकेन । यसको एउटै कारण हो, देशको ग्रहदशा राम्रो छैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सम्भावना कत्तिको छ ?
गिरिजाप्रसाद कोइराला एक प्रजातान्त्रिक नेता हुनुहुन्छ, राष्ट्रका लागि पनि उहाँले ठूलो योगदान पुर्‍याउनुभएको छ । तर ग्रहस्थितिअनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सम्भावना कुनै छैन ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था भावी दिनमा कस्तो होला ?
मैले यस अगाडि नै भनिसकें गिरिजाप्रसाद कोइराला दृढ इच्छाशक्तिका कारण बाँचिरहनुभएको छ । उहाँको यो अहिलेको नयाँ जीवन हो, समयले बिदा दिने बेला भए पनि एक्स्ट्रा (अतिरिक्त) आयुमा उहाँ बाँचिरहनुभएको छ । उहाँको राशिमा यतिबेला मंगल बसिरहेको छ र बेक्र भइरहेको छ । त्यसैले उहाँका प्रत्येक निर्णय र कार्यहरू ग्रहका दृष्टिले प्रतिकूल बन्दै जान्छन् ।
एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुने हल्ला छ, ग्रहदशाले के भन्छ यसबारेमा ?
माधवकुमार नेपालसम्म पुगेर उहाँको चिना हेरेर जान्ने अवसर प्राप्त भएको छैन । देशको ग्रहस्थितिअनुसार माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । नेपालको राशिहरू माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन ।
देश अब कसरी अगाडि बढ्छ त ?
मंगलस्थितिले हेर्दा कुनै पनि समय सैनिक कु हुनसक्छ र त्यो केही समय रहन सक्छ ।
सेनाप्रमुख रुक्मांगत कटवालको ग्रहदशा हेर्नुभएको छ ?
उहाँको पनि चिना हेरेको छैन ।
राजाको ग्रहदशा सप्रिएको हो ?
स्वंय राजाको चिना हेरेको छैन । तर राजा ज्ञानेन्द्रको राशि कुम्भ हो । राजाले जे जति कुरा भोगे त्यो २०६३ सालको ग्रहदशाअनुसार भोगेका हुन् । २०६४ सालको प्रारम्भदेखि नै राजाका ग्रहदशाहरू अनुकूल र बलियो बन्दै गएका छन् । मंगल ग्रह अरूका लागि प्रतिकूल भए पनि राजाका लागि राम्रो साबित भइरहेको छ । राजाप्रतिको जनताका गलत सोचाइहरू क्रमशः घट्दै जाने सम्भावना छ ।
युवराज पारस राजा हुने सम्भावना छ ?
बाबु राजाको ग्रहदशा राम्रो भएपछि छोरा पनि राजा हुन्छन् भन्ने कुरा सामान्य हो । पारसको राशि कन्या हो । कन्या राशिमा शनि गएको छ । अहिले यस विषयमा केही नबोलौँ । अर्को कुरा के हो भने अत्यन्त सशक्त बलवान् कुण्ड र ग्रह नवयुवराजको छ ।
प्रचण्डले दुइ वर्षभित्र राष्ट्रपति हुन्छु भनेको पत्रिकामा आयो, उहाँको त्यो भनाइ सत्य होला त ?
दुइ दशकदेखि भूमिगत भएका, सशस्त्रयुद्ध गरेका महान् नेता प्रचण्डलाई पनि अवमूल्यन गर्न चाहन्न तर उहाँको नाम र राशिलाई हेर्दा प्रचण्ड राष्ट्रपति हुने कुनै सम्भावना छैन ।
नेपालमा कहिले गणतन्त्र आउला त ?
नेपालमा तत्काल गणतन्त्र आउने कुनै सम्भावना छैन, त्यसैले प्रचण्ड राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना पनि छैन । आन्दोलनको समयमा गणतन्त्र आउने सम्भावना थियो तर त्यो समयमा लुगा परिवर्तन नगरी पखाल्नेमात्र कार्य भयो । नेपालमा गणतन्त्र आउने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छैन ।
शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाको दशाचाहि कस्तो छ नि ?
मंगलग्रह प्रबुद्ध भएपछि क्षेत्रीहरूको वर्चस्व बढ्छ । अर्को कुरा मैले चिना हेरेका व्यक्तिहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको हेरेको छु । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर र सूर्यबहादुरको ग्रहदशा मजबुद बन्दै गएको छ ।
तपाइं त नेपालको राजधानी नै सार्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन ?
नेपाल राज्य भन्ने बित्तिकै त्यसको वृश्चिक राशि हुन्छ र काठमाडौंको मिथुन राशि हुन्छ । राज्य र राजधानीको तालमेल नमिल्दासम्म त्यसले दूरगामी असर गर्ने कुनै पनि प्रकारको कार्य गर्न सक्दैनन् । यो कुरा मैले २०६२ सालमा नै भनेको हुँ । त्यसैले नेपालको राजधानी अपरिहार्य रूपमा बदल्नुपर्छ । अब ७५ को ठाउँमा एक जिल्ला थप्नुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा यतिधेरै खर्च भएका छन् भने देशमा शान्तिकायम गर्न यति सानो काम किन नगर्ने !
संविधानसभा माओवादी हल्ला मोबाईल awards सेलेब्रिटी पेट्रोल crisis streets अनुभव समलिङगी hi-life celebrity events festival